उद्यम पाठशालाको रुपमा महोत्सव लगाउँदैछौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / उद्यम पाठशालाको रुपमा महोत्सव लगाउँदैछौं
उद्यम पाठशालाको रुपमा महोत्सव लगाउँदैछौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता, स्लाइड February 14, 2018	0 202 Views
दाङ जिल्ला उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं महो त्सव मूल आयो जक समितिका संयो जक
फागुन ३ गते दे खि १३ गते सम्म दाङ उद्यो ग वाणिज्य संघको आयो जनामा दाङ व्यापारिक तथा पर्यटन महो त्सव एवं प्रदे शस् तरीय औ द्यो गिक कृषि प्रदर्शनी २०७४ सञ्चालन हुदै छ । महो त्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे को आयो जकले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा महो त्सवको उद्दे श्य, महो त्सव व्यवस् थापन र आम नागरिकलाई हुनसक्ने फाइदाका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले दाङ उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं महो त्सव मूल आयो जक समितिका संयो जक नारायण भुसालसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
विगतको भन्दा यसपालिको महो त्सवमा के फरक छ ?
अलि भिन्न हुने छ । स् थानीय उद्यमीहरुलाई प्रो त्साहन गनेर् गरी यो महो त्सवको आयो जना हु“दै छ । सबै भन्दा धे रै स् टल उहा“हरुलाई नै दिने छांै  । लघु उद्यमीहरु एकदमै आकर्षित हुनुभएको छ । अकोर् तर्फ स् थानीय वाणिज्यअन्तर्गतका व्यवसायीहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । बाहिरबाट एकदमै न्यून संख्यामा व्यवसायीहरु आउनुभएको छ । पहिले का महो त्सवमा धे रै स् टलहरु राख्थ्यौ ं जसले स् थानीय व्यवसायीहरुलाई अप्ठे रो पनेर् हुन्थ्यो भने यसपालि स् थानीय व्यवसायी, लघु उद्यमीहरुलाई प्राथमिकतामा राखे र थो रै स् टल राखे र यो महो त्सव आयो जना गदैर् छांै  ।
महो त्सवलाई मात्रै किन निरन्तरता दिइन्छ ?
यस् ताखालका महो त्सवले लुके र रहे का चिजहरुलाई बाहिर ल्याउने काम गर्छ । जस् तो ०६३, ०६९ र ०७२ को महो त्सव लगायौ ं । यी तीनवटा महो त्सवको सफलता भने को ने पालकै हो ची व्यक्ति ईश्वरीमाया छिनाल, विश्वकै हो चो व्यक्ति चन्द्रबहादुर डा“गी जुन हामीले महो त्सवमार्फत कुनाकन्दराबाट बाहिर ल्याउने काम ग¥यौ ं । त्यस् तै विभिन्न उद्यमीहरुलाई पनि उजागर गनेर् काम ग¥यौ ं । अहिले दाङको अल्लो , दाङको मह भने र चिनाउने अवसर यिनै मे ला महो त्सवबाटै भएको हो  । यति मात्रै हो इन, जिल्लामा आर्थिक परिचालन र बृद्धिका लागि पनि महो त्सवले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ नै  । महो त्सवकै माध्यमबाट संकलित रकमले शहीद गे ट निर्माणमा टे वा पुग्यो भने घो राहीमा बहुउद्दे श्यीय सभागृह निर्माणको थालनी भएको छ । जसलाई सभासद, राजनीतिक दल, सरकारको सहयो गमा २६ करो ड ७७ लाखको भवन शुरुवात गनेर् काम भएको छ । त्यसै ले स् थानीय कला, संस् कृति संरक्षण, भौ तिक पूर्वाधार विकास, लघु उत्पादनको प्रबद्र्धन गनेर् काम भएको छ । यही भएर हामीले यसपालिको महो त्सवबाट यति रकम संकलन गछौर् ं भने का छै नौ ं बरु लघु उद्यमीहरुले उत्पादन गरे का, व्यवसायीहरुले उत्पादन गरे का वस् तुहरुको प्रचार गनेर् हाम्रो यो जना छ । दाङमा साबुन, दालमो ठ उद्यो ग छन् तर कतिपय उपभो क्ताहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । भो लि कुनै परिस् िथतिले नाकाबन्दीको अवस् था आयो भने हामीस“ग भएको उत्पादनलाई बाहिर ल्याउन सक्यौ ं भने हामी आत्मनिर्भर छौ ं भन्ने कुराको महसुस गराउन यो महो त्सवले भूमिका निर्वाह गनेर् छ । उता उत्पादकलाई पनि प्रदर्शनीमा राखे पछि मे रो व्यवसाय प्रवद्र्धन हु“दै छ भन्ने लागो स् भने आम उपभो क्ताहरुलाई पनि हामी आत्मनिर्भर बन्दै छौ ं है भन्ने सकारात्मक सन्दे श जाने र यसलाई बढाउ“दै गयो भने हामी निर्यात पनि गर्न सक्छांै भन्ने उत्साह सबै मा जगाउनका लागि यस् ता महो त्वलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
पै सा कमाउन मात्रै हो इन, उत्पादित वस् तुको बजारीकरणका लागि गनैर् पनेर् दे खियो महो त्सव ?
बिल्कुलै हो । किनभने हामीले महो त्सवलाई नाफाका लागि मात्रै जान खो जे को भए हामीले अहिले पनि चार÷पा“च सय स् टलहरु लगाउने थियौ ं तर दुई सय १४ वटा स् टल मात्रै राखे का छौ ं । धे रै स् टल राखे र बाहिरको सामान बे च्नु भन्दा थो रै स् टल राखे र स् थानीय उत्पादनलाई अगाडि ल्याउने काम हामीले गदैर् छौ ं । अकोर् कुरा दाङमा औ द्यो गिक क्षे त्रको स् थापना गर्नुपर्छ भने र दाङ उद्यो ग वाणिज्य संघले अवधारणा प्रस् तुत ग¥यो  । पछिल्लो चरणमा आउ“दा सरकारको औ द्यो गिक क्षे त्र व्यवस् थापन लिमिटे डले हामीलाई सहयो ग गरे को छ । भर्खरै सम्भाव्यता अध्ययनको टो ली दाङ आयो र १७ लाख ९० हजार रुपै या“ सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम पनि विनियो जन गरिएको छ । यसमा घो राही उपमहानगरपालिकाले पनि साथ दिएको छ । नगरसभाबाटै उपमहानगरले निर्णय गरे को छ । औ द्यो गिक क्षे त्रका आवश्यकता किन ? औ द्यो गिक क्षे त्र भएपछि के फाइ“दा हुन्छ भन्ने खालका कुराहरुलाई जनसमुदायलाई बुझाउने काम गनेर् छ । यो कुनै व्यक्ति विशे ष भन्दा पनि आम दाङबासीको हितका लागि यस् ता गतिविधिले काम गनेर् छन् ।
बाहिरबाट आउने ले कमाउने स् थानीय व्यवसायी मारमा पनेर् गुनासो यसपालि सुन्नुपदैर् न ?
व्यवसायीहरुको हकहितको पक्षमा काम गनेर् संस् थाको हिसाबले हामीले व्यवसायीको समस् या पनि हे र्नुपर्छ । त्यसकारण व्यवसायीहरुको राय, सल्लाहकै आधारमा बाहिरबाट आउने स् टल कम गनेर् , स् थानीयलाई धे रै स् टल दिने र त्यसमा पनि लघु उद्यमीहरुलाई थप प्राथमिकता दिने काम हामीले गरे का छौ ं । पहिलो मा कृषि, दो स्रो लघु उद्यम त्यसपछि वाणिज्यअन्तर्गतका व्यवसायलाई दिने काम गरिएको छ । त्यसमा पनि संख्या तो किएको छ । ३० भन्दा धे रै फे न्सी स् टल रहने छै नन् । सिरक, डसनाको स् टल १५ भन्दा माथि नजाने भन्ने खालका नीति अपनाएका छौ ं । यसले स् थानीयहरुको चाहना पूरा भएको छ । स् थानीय मात्रै राख्ने भन्दा आउ“छन् कि आउ“दै नन् भन्ने चुनौ ती थियो  । तर स् थानीय व्यवसायीहरुले साथ दिनुभएको छ । करिव सबै स् टल बुकिङ भइसके का छन् ।
तामझाम र विदे शीसम्मले पै सा लै जाने तर उद्दे श्य पूरा नहुने समस् या त छ नि महो त्सव सञ्चालन गर्दा ?
त्यस् तो छै न । ह“ुदै न । दाङ उद्यो ग वाणिज्य संघले हिजो का दिनमा पनि त्यति धे रै तामझाम गरे को जस् तो मलाई लाग्दै न । अहिले पनि हामीले यस् तो हुन दिने छै नौ ं र पै सा बाहिर जान दिने छै नौ ं । त्यही हिसाबले तयारी पनि भएको छ । बाल उद्यान पनि अहिले ने पालीले नै चलाउनुहुने छ भने अरु उत्पादनका कुरा पनि स् थानीय नै हुन्छन् । उहाहरुले स् टलमा के ही स् कीम लगाएर बे च्दा धे रै बिक्री हुन्छ र आम्दानी पनि हुन्छ । यो एउटा अवसर पनि हो  । लघु उद्यमीहरुका लागि त ठूलो अवसर हो भने अन्य व्यवसायीहरुको हकमा पनि कमसे कम बाहिरबाट आएर कुनै सस् तो सामान ल्याएर कुनै उपभो क्तालाई ठगी हुने खालका कुराहरु आउथे विगतका दिनहरुमा तर अहिले यहींका व्यवसायीहरु पनि त्यस् ता वस् तुहरु राख्नुहुने छै न । त्यसै ले पनि त्यस् ता गुनासा अहिले आउने छै नन् । हामीले खर्चलाई पनि पारदर्शी बनाउने छौ ं । हिजो को जस् तो तामझाम गनेर् अवस् थामा पनि हामी छै नौ ं । हामीले प्रमुख अतिथिको रुपमा उपराष्ट्रपतिलाई बो लाएका छांै  । त्यसलाई तामझाम मानिदै न । किनभने राष्ट्रियताको सवाल छ । त्यस् तै कलाकारहरु पनि हामीले सो ही अनुसार चयन गरे का छौ ं । स् टलहरु पनि कम बनाएका छौ ं ।
आम उपभो क्ताहरुका लागि यो महो त्सवबाट हुने फाइदा के हुन् ?
कुनै व्यक्ति वै दे शिक रो जगारमा जानु भएको छ उहा“का परिवारहरु यहा“ आउनुहुन्छ भने एउटा उत्पादकले सामान्य लगानीमा आफ्नो उत्पादन कमसे कम बजारीकरण गरिरहनुभएको छ । उहा“ले आफ्नै घरमा बसे र उत्पादन गरिरहनुभएको छ र त्यसले आफ्नो सिंगो परिवारको पालन पो षण गरिराख्नुभएको छ भने उहा“हरुलाई के प्रे रणा मिल्न सक्छ भने ती उद्यमीले ने पालमै बसे र उद्यम गर्न सक्नुभयो , उद्यमी बन्न सक्नुभएको छ भने मे रो श्रीमान, मे रो श्रीमती वा मे रो छो रा, भाइ, नाति किन यहीं उत्पादनमा नलाग्ने त ? लघु उद्यमीले अल्लो उत्पादन गर्नुभएको छ भने हामीले चाहि“ किन नसक्ने त ? यो एउटा सपो र्टको विजने श हुनसक्छ । बाहिर गएर थुप्रै युवाहरु बसिराख्नु भएको छ भने अब कमसे कम यहीं पनि गरे पछि हु“दो रहे छ भन्ने सिकाइ हुने छ भन्ने मलाई लागे को छ । अकोर् तर्फ चाहि विभिन्न अवसरहरुको सिर्जना पनि हुने छ । लगानीका आधारहरु पहिचान हुने छन् । यो –यो चिजमा लगानी गर्नुपर्छ वा विजने श गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुने छ । त्यसै ले यो महो त्सवले आम दाङबासीहरुका लागि उद्यम पाठशालाको काम गनेर् छ भन्ने हो  । त्यस् तै दाङका विभिन्न पर्यटकीय क्षे त्रको जानकारी लिन सकिने छ । कति सम्भव हुन्छ हामीले सबै गाउ“पालिका र नगरपालिकाहरुलाई तपाइ“हरुले एक÷एकवटा स् टल राखे र आफ्ना गाउपालिका वा नगरपालिका क्षे त्रमा यो –यो वस् तुको उत्पादन
हुन्छ र हाम्रा पर्यटकीय क्षे त्रहरु यो –यो हुन् भने र राखिदिनुभयो भने त्यो क्षे त्र पर्यटकीय गन्तव्य बन्नसक्छ । पुरन्धाराको पर्यटकीय क्षे त्र के हो ? उत्पादन के हो ? या बंगलाचुलीको पर्यटकीय क्षे त्र कहा“ हो ? हामी दाङबासीहरुलाई नै एकअर्काे ठाउ“बारे जानकारी नहुनसक्छ । त्यसकारण आन्तरिक पर्यटनको विषयमा पनि यसले भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । हामीले गाउ“पालिका, नगरपालिकालाई आग्रह गरे का छौ ं । यस विषयमा के ही प्राप्ति हुन्छ नै  । दे उखुरीको मान्छे लाई पुरन्धाराको छहराको विषयमा थाहा नहुनसक्छ भने पुरन्धाराका मान्छे लाई जखे राको बारे मा थाहा नहुनसक्छ । त्यसकारण सबै क्षे त्रलाई एकै ठाउ“मा राखे र विभिन्न सम्भावनाका बारे मा छलफल र जानकारी गराउने काम महो त्सवले गर्नसक्छ ।
तयारी कहा पुग्यो ?
हाम्रो तयारी ९० प्रतिशत भन्दा धे रै भइसके को छ । सबै कामहरु अन्तिम चरणमा पुगे का छन् । सचिवालय स् थापनालगायतका काम भइरहे का छन् । तयारीको काम करिव अन्तिम चरणमा पुगे को हुनाले अब तयारी पूरा भयो भने पत्रकार सम्मे लनमार्फत जानकारी गराउने छौ ं ।
यसपालि महो त्सवको आकर्षण के हो ?
अहिले त्यस् तो कुनै आकर्षण यो भने का छै नौ ं । पर्यटकीय क्षे त्रको अवलो कन गराउनका लागि हे लिको प्टर आउ“दै छ । हामीले त मुख्य आकर्षण भने को लघु उद्यमलाई नै माने का छौ ं । दाङमै यस् तो वस् तु उत्पादन हुने रहे छ भन्ने महो त्सवको आकर्षण हुने छ ।
के ही भन्नै पनेर् छुट्यो कि ?
हामीले महो त्सवका लागि विभिन्न महानुभाव तथा दाङबासीलाई रे डियो , पत्रपत्रिका, अनलाइनमार्फत निमन्त्रणा गरिसके का छौ ं । कतिलाई चिठ्ठी नपुग्न पनि सक्छ । म यही पत्रिकामार्फत विशे ष अनुरो ध गर्न चाहन्छु कि यसपालिको महो त्सव विशे ष खालको छ । अन्य संघसंस् थाहरुले लगाउने महो त्सव भन्दा दाङ उद्यो ग वाणिज्य संघले लगाउने महो त्सव भिन्नखालको हुन्छ भन्ने कुराको महसुस हामीले गराउ“दै छौ ं । त्यसै ले ३ गते को उद्घाटन समारो हमा उपस् िथतिका लागि सम्पूर्ण जनसमुदाय, पाहुनाहरुलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु । यही फागुन ३ दे खि १३ गते सम्म जुन महो त्सव हु“दै छ त्यसलाई सञ्चालनको क्रममा विभिन्न सल्लाह सुझावको आवश्यकता पनि चाहिन्छ । आवश्यक सल्लाह सुझावको अपे क्षा गरे का छां  ।
Previous: पचास विद्यार्थीले गरे ‘फ्ल्यास मुभ’
Next: गुफाको प्रचार गर्न मेला